Rivaldo oo ka hadlay fikirkiisa ku aadan wararka Lionel Messi la xiriirinaya inuu ku biirayo Paris Saint-Germain – Gool FM
(Barcelona) 22 Jan 2021. Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaan ka labalabeynin inuu sheego in Lionel Messi uu jawi fiican ka heli karo kooxda Paris Saint-Germain, inkastoo xiddiga reer Argantina uusan weli shaacin go’aankiisa kama dambeysta ah.
Messi ayaa sugaya natiijooyinka doorashooyinka gudiga Barcelona iyo mashruuca kooxda sanadaha soo socda kahor inta uusan gaarin go’aankiisa ku aadan sii joogitaanka kooxda reer Catalonia ama uu si bilaash ah ugu biiro koox kale suuqa xagaaga.
Rivaldo ayaa aaminsan in Lionel Messi laga yaabo inuu diyaar u yahay inuu ka tago Blaugrana isla markaana uu bilaabo loolan cusub oo ah kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ah.
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo oo la hadlaya Betfair Radio ayaa yiri:
“Paris Saint-Germain waxay noqon doontaa meesha ugu fiican ee uu ku nagaan karo Lionel Messi, waa koox aad u abaabulan.”
“Messi sidoo kale wuxuu fursad u heli doonaa inuu markale la ciyaaro Neymar, waxaana suuragal ah inaan ogaanno in horyaalka Faransiiska uu ka tartan yar yahay kan Spain iyo kan Ingiriiska, sidaas darteedna wuxuu diyaar u noqon karaa tartamada Champions League, wuxuuna ku jiri karaa xaalad jiree oo aad u wanaagsan.”
“Marka laga soo tago wixii aan sheegay, Paris Saint-Germain waa mid ka mid ah kooxaha yar ee bixin kara mushaharka uu Messi haatan ka qaato Barcelona, ​​imaatinkiisa wuxuu ka caawin doonaa Horyaalka Faransiiska inuu horumar badan sameeyo, waxaan qabaa in Messi uu haysto sababo ku filan uu ku dhihi karo haa dalabka dalabka PSG.”
Arsenal, Manchester City iyo Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono tartanka FA Cup-ka